Masuuliyiin ka tirsan dawladda oo soo dhaweeyey Wiil dhalinyaro ah oo shahaadada PHD ka qaatay Jaamacadda Luzon ee dalka philippines – Madal Furan
Hoy > Warka > Masuuliyiin ka tirsan dawladda oo soo dhaweeyey Wiil dhalinyaro ah oo shahaadada PHD ka qaatay Jaamacadda Luzon ee dalka philippines
Masuuliyiin ka tirsan dawladda oo soo dhaweeyey Wiil dhalinyaro ah oo shahaadada PHD ka qaatay Jaamacadda Luzon ee dalka philippines
Editor September 18, 2018 0
Muqdisho (Madal Furan) – Dr.Mursal Suldan Cabdullaahi oo shahaadada ugu sarreysa ee PHD ka qaatay Jaamacadda Luzon ee dalka philippines ayaa noqday wiilkii ugu horeeyey ee Soomaali ah oo isaggoo 27 jir ah qaatay Shahaadadaasi, waxaana maanta uu soo gaaray magaaladda Muqdisho.
Garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ayaa waxaa kusoo dhaweeyey Masuuliyiin ka tirsan dawladda oo ay kamid yihiin Wasiirka wasaaradda Duulista hawada, Wasiir dawlaha Xafiiska R/wasaaraha, Wasiir ku-xiggeenka Amniga iyo xubno ka tirsan Baarlamaanka.
Xildhibaan Sakariye Xaaji Maxamuud oo qeyb ka ahaa masuuliyiinta soo dhaweysay Dr Mursal, ayaa kula dardaarmay aqoonta uu soo bartay in dalkiisa uu ugu adeego.
Wasiir ku-xiggeenka wasaaradda Amniga XFS mudane C/naasir Saciid Muuse ayaa sheegay in dalka uu u baahan yahay dhalinyaro waxbartay.
Wasiir dawlaha xafiiska Ra’iisul wasaaraha XFS mudane Cabdullaahi Xaamud ayaa isna dhankiisa sheegay in Dr Mursal ay ku dayan doonaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee raba in meel wanaagsan waxbarashada ay ka gaaraan.
Dr Mursal Suldan Cabdullaahi ayaa u mahad celiyey dhammaan masuuliyiinta kala duwan ee soo dhaweysay, isaggoo xusay in aqoontii uu soo bartay iyo qabradiisa dalka iyo dadka Soomaaliyeed inuu ugu shaqeyn doono.
Dr Mursal ayaa waxa uu kamid ahaa ardayda kaalmaha hore ka galay, uguna sarreysay natiijada Imtixaanka Jaamacadda, isaggoo qaatay bilada sanadlaha ah ee la siiyo ardayda ugu dadaalka badan ee dhigata Jaamacadda Luzon ee dalka philippines.
DAAWO: Magaalada Laascaanood oo doorashadii Soomaaliland la soo gabagabeeyey iyo xisbiga ugu taageero badan
SAWIRO:- Suuqyadda Muqdisho oo lagu kala iibsanayo hubkii dowladda Imaaraadka ee xerada Gordan looga tegay